Misy manampahefana miasa ve ho an'Itaosy ?
Date: 03 août 2017 - 11:04
Tato ho ato dia manjary adiny 2 raha kely indrindra vao tonga aty Analakely izay mandray bus avy eny Itaosy. Ireto no anisan'ny antony hitako mahatonga izany :
- tsy misy mankany Analakely fa mihodina eny @67ha na eny Ampefiloha ireo fiara mpitatitra. Hitan'ireo polisy eo @reo sampanana ireo izany fa dia jereny fotsiny; Manomboka @ 4 ora hariva aza moa dia tsy misy ligne 143 hitanao intsony aty Analakely.
- tsy manaja ny sisin-dalana tokony hijanonany ireo fiara mpitatitra, eny @ iny lalan'Itaosy iny.Hitan'ireo polisy sy zandary izany fa dia jereny fotsiny;
- tsy manaraka ny lera voafetra ho fivoahany ny sarety sy ny posy @ lalan'Itaosy. Hitan'ireo polisy sy zandary izany fa dia jereny fotsiny;
Ireo rehetra ireo dia hita fa tsy fanarahan-dalàna miharihary avokoa, ka mampanontany tena hoe mba misy tompon'andraikitra ve miasa ho an'ny fandaminana ny fitaterana sy ny fifamoivoizana eny Itaosy eny ? Ny tompon'ny Koperativa, ny polisy, ny zandary, sns ...
Raha mahafatiantoka ny tompon'ny fiara ny manao ligne Itaosy-Analakely, nefa nekeny tao @ cahier de charges, nahoana izy no tsy miova ligne hafa hiasàna, fa faly manao kitoatoa sy mampijaly vahoaka ?
Re: Misy manampahefana miasa ve ho an'Itaosy ?
Date: 03 août 2017 - 12:08
Avelao ho avy levalo dia amin'ny Sabotsy mifankahita,vendrana daholo eny na sarety na bisikleta nascooter na taxibe na taxikely,mankaleo be nama aty amintsika
Par: Tsy araka
Date: 03 août 2017 - 19:04
Tsy araka ilay hoe "Ita-Osy" ?
Tsy zavapadiana ho an ny manampahefana sy ny vahoaka ary Ra8 ve izany ?
Par: It os
Date: 04 août 2017 - 09:53
Ny ahy ny ataoko dia miovaova arrêt aho isakin'ny maka Btax, nefa milahatra ihany rehefa akaikaiky faran'ny volana izay.
Date: 04 août 2017 - 14:04
Mponin'Itaosy > ka mandoa ecolage dia la voie est libre.
Date: 04 août 2017 - 17:48
Ita Osy : hita ny Osy = midika fa tananan ny mpiompy OSY ny teny.
Osy = mampatahotra ny mponina eny fa mpiompy osy. Mpamatsy ny mpanompo osy ry zareo.
Mataotra ny taxibe d aleony miodina.
Mazava ny zavamisy
Date: 05 août 2017 - 14:15
Mifindrà trano fa inona no ataonao any @ bas quartier any e. Nareo ko ange mitady loza e.
Date: 06 août 2017 - 15:18
Bas quartier aona ndray e, any no tanana favy takatry ny mpanana ka BAS inn aona ary !
Ny Chaussette quartier mbola tsy nisy tam fotoanany tsinn.
Date: 06 août 2017 - 15:21
Fa malaza hoe any daholo ny vovo ny bandy mpisam.
Sa hoe niakatra kokoa ny standing ndry zalahy dia ny mafr aminy no mbola ny etsy Andranomanalina ?
An an an fanontaniana fa tsy affirmation
Date: 31 août 2017 - 12:59
Tokony ampiana hoe ny mpitsabon'Itaosy sa...
Date: 04 septembre 2017 - 15:45
Zay vo mazava ny tiana holazaina hay mpiasampanjakana toy ny mpitsabo miaramila mpotandro ny filaminana mpanabe sns... ?
Raha ny manampahefana mantsy no hanontaniana d ry zalahy tompon ny hery sy tanjaka am asa fanamparampahefana zay no ao andoha...
Bah mety ho efa retraite daholo zareo ngamba matoa gaboraraka be ny tanana
Date: 04 septembre 2017 - 16:17
tsss le polisy eo ampasika ireo miints no tsy mahay ninin
Date: 11 septembre 2017 - 22:01
Fa nareo ve mieritreritra we ny ligne hafa dia manome billet sns ;
Date: 14 septembre 2017 - 12:18
Hitanareo v lé polisy razokiny eny Itaosy iny! taloha teo izy teo am galana teo no mijoro d zao indray izy eo am arret ampasika! Ref misy olona mitoraka salut an'lery ka miteny aminy mandalo d voan'ny donakation nedala manaramaso ilay olona mandeha! tena malatsaka mitsy fa milay eny itaosy e!
Par: mpiompy kisoa an'itaosy
Date: 14 septembre 2017 - 15:01